Wuu is Xureeyey!! (Sheeko Gaaban) | Doodwadaag waa Danwadaag.
Daashoow, wuxuu ifka kusoo biiray iyada oo ay colaaddii jirto. Aabihii Dooyoow wuxuu ahaa geesi, garyaqaan, gabyaa, aftahan, howlkar ah. Dooyoow wuxuu beesha u ahaa ninka ugu howl karsan oo ugu shaqo badan taas waxeey dhaxalsiisay inuu noqdo ninka ugu xoolo badan gaar ahaan Geelisa oo kun Halaad kor u dhaafayay.
Dhalasha Daashoow waxey reerka u horseedday waa cusub oo barwaaqo ah. Daashoow Hooyadii waxeey curatay Daashoow dabadii 3 wiil & gabar oo kala ahaa Daqarre, Da’uud, Gurrac & Dahabo. Dhamaan waxey gaareen hanaqaad. Daashoow oo reerka curad u ahaa, wuxuu reerka u ahaa intii hore qof mas’uul ah. Wuxuu durba noqday guur doon. Aabihii Dooyoow oo la hadlaya wiilkiisa Daashoow baa yiri “Aabe dhaban & quruxi yeelkadeede, naag laxjecli leh ha u laba-lugoodin”. Ugu dambeyntii Daashoow wuxuu Goostay inuu Guursado Deeqo oo gabar gaarinimo lagu sheego aheyd, reerka dhan amaaneen filkeedna dhaaftay oo ka carceertay.
Waxaa idlaaday labbo gu’, Daashoow & Deeqona waxey nasiib sadeen Labo caruur ah, wiil & gabar. Balo waxey biloobantay markii deegaanku ay soo gaadhay cayaar dhaqameed loo yiqiin “Wilisiqo”. Daashoow, wuxuu la dhacay cayaarta, wuxuuna ahaa qof fudud, fiino ah, fariidnimo & ciyaar jeceyl hibo u lahaa. Wuxuu si dhaqsi leh ku noqday fariid Wilisiqadii. Wuxuu lahaa xirfado badan sida tirinta Ereyada Wilisiqada. Iska daa aabihii Dooyoow’e wuxuu iloobay reerkiisii & caruurtiisii.
Wuxuu ciyaarta tartan Wilisiqeedka ugu socdaali jiray isaga iyo saaxiibadii dhulal fog oo maalmo loo safro. Isaga oo ku kajamaya si kalana ku faanaya Xoolo badnida adoogii oo hadana ciyaarta Wilisiqada tirinaya ayuu Baashoow yiri “ Caano Geeloow Col kula tagyeey, Caloosheey naga Cusleeyeen”. Daashoow Walaalihii Ragga ah, waxeey sidoo kale raaceen waddadii walaalkooda ka weyn. Waa tii hore loo yiri “Geela Danbe Ka hore Saanqaadkiisuu Leeyahay”. Wuxuu Waqtiga is guraba, waxaa dhanka kale dada’ ku socotay Daashoow aabihii Dooyoow oo rafaad, daal & dhib badan kala kulmay Dhaqidda Geela iyo barbaarinta caruurta yar yar ee Daashoow dhalay. Wixii la joogaba, waxaa Aleystay caruurtii Daashoow oo ku geeriyooday Webiga oo ku dhegganaa reerka tuulada uu deggenaa. Intaas oo Musiibo inta ay dhacayaan Daashoow & walaalihii waa maqan yihiin. Aaskii kadib Waxaa caadi ku soo noqday noloshii reeraha balse oday Dooyoow waxaa ku dhacay isbbadal badan iyo feker aad gaan u ah. Wuxuu ku dhibtooday howsha uu kaligii oo oday waayeel ah dilootay. Wuxuu sidoo kale ka welwelsanaa mustaqbalka caruurtiisa aan garaadka laheyn. Wuxuu ahaa duqu mid aad aftahan u ah, Waayo-aragnimo nololeedna ay u wehliso, cilmi yar oo xaga sooyaalka, gabayada & Diinta ah.
Maalin maalmaha ka mid ah, isaga oo waraabinaya Geeliisii yaraa ee ka haray inta duurka laga qunsaday iyo intii kale ee Waraabe, Libaax & Habar dugaag heleenba ayuu yiri isagoo soo jiidaya wadaanta ”Intaan Joogo Jooga, Markaan Jiito Jarma”. Waxuu ugu dan lahaa caruurta oo uu ka waday ha arkeen nolosha qaraar & Sida ay u taal. Waxeey yimaadaan hadana sii Jarmaadaanba, waxaa Mowtkii soo booqday odey Dooyoow xilli uu geyiga Abaar iyo Gumeysi isbiirsaday hayay. Geeliina Waxaa kasoo haray in aan Mooro Buuxin. Daashoow wuxuu beeniyey Oraahdii aheyd “Fuleyga, inteyan u iman geeridiisii, nolosha ayuu 100 jeer ku dhintaa”. Wuxuu Fekeraba wuxuu goostay inuu raxan Geela ka mid ah qunsado sidii Nabi Muxamad uu uga haajiray Maka uga qaxo deegaanka uu joogay oo loo yaqaan Halgan. wuxuu soo Qabtay Koonfur, wuxuu socdaba wuxuu hayaankiisii yimid meeshii uu rabay halkaas oo uu deganaa dhowr bilood ka dibna ka iibiyey intii yareyd ee geela oo uu watay kuna iibsaday Gaari Dameer oo waagaa aad Qiime badan u lahaa, waqti walba iyo waayihiisee, wuxuu noqday Daashoow Ilbax, geesi ah kuna biiray rafaad iyo orod badan kadib ciidamadii dagaalkii 1aad ee Aduunka, oo ay Isticmaarkii Ingriisku ka qortay Muqdisho, ciidamadaa oo la isugu daray tababar, saanad iyo gunnoba. Daashoow waxaa lagu xushay bootinta oo uu aad ugu fiicnaa, wuxuu si fiican u bartay Afka Talyaaniga oo uu macalin ku noqday. Wuxuu in badan ahaa askarta Munishiibiyada ee boonada jarta, kadibna waardiye u noqday nin garyaqaan ahaa, oo ay isku reer hoose ahaayeen oo isna waa hore ka soo haajiray dhulkii ay reeruhu degenaayeen.
Maalin Maalmaha ka mid ah, oo uu qaadigu Gar-eex sameeyey ayaa dagaal ka dhashay lagu dhaawacay Daashoow, waxaana loola soo cararay Deegaanka Buundo Baraawe, halkaas oo lagu daweeyey Shaqadiisiina uu ka sii watay. Wuxuu isticmaar la shaqeeyaba waxaa ku dhalatay gobanimo raadin iyo dareen wadaniyadeysan oo Soomaaliyeed. Waxaa saameyn xooggan ku yeeshay ereyada Laashinno badan oo deegaanka taageero LEEGO ka ahaa, ereyada aadka u saameeyey Daashoow waxaa ka mid ahaa “Lammo Fiilo Fuurkoodaa Furunta leey Dhigaayi, Habarteey oo Faloowhaayso aa leeyga Fiirsahaayi” Wuxuu si hoose xiriir u la yeeshay rag sidiisa oo kale dareenkaa lahaa oo Muqdisho, B/weyne, Kismaayo & Hargeysa joogay. Wuxuu noqday mid ka mid ah wakiillada ururkii Gobanimo doonka ahaa ee dalka ka curtay. Markii Dagaalkii 2aad ee Aduunku idlaaday, wuxuu u huray gabanimada maal, waqti, hanti intii yareyd ee uu heystay isaga oo askari ahaa. Wuxuu lahaa rajo ah in jiilalka dambe ee Soomaalida ah ay hormuud u noqon doonaan Qaaradda iyo Dunida iyo mideynta Soomaalida Dhamaanteed.
Himilooyinka aanu kor ku soo xusnay iyo kuwo kale oo badan ayuu lahaa isaga oo aanan wax bartii oo aqoon ah laheyn. Wuxuu yeeshay qoys, waxaa u Dhaxday Marwo Wadaniyad aheyd oo qurux, qaayo & qiime laheyd oo qaddarin uu ka heli jiray. Wuxuu gobanimadii dalka calanka Soomaaliyeed ka taagay deegaanka uu degganaa ee Buundo Baraawe. Waxuu noqday nin walaalihii iyo reerihii uu ka yimid u soo socdaalaan oo ay ku soo hirtaan. Waa la dalacsiiyey wax yar kadib Gobanimadii dalka, wuxuuna ka qeyb qaatay difaacidii dalka, dagaalkii 1964-tii, dhaawac ka soo gaaray & Xanuuno ay waayeelnimadu la mataaneysnaa ayuu u geeriyooday horaantii curashada towradii ee kooxdiisa Milatarigu hor kacayeen.